सम्भोगको क्रममा महिलाले इन्कार गरे पनि पुरुष रोकिनु नपर्ने::Radio Chhahari
सम्भोगको क्रममा महिलाले इन्कार गरे पनि पुरुष रोकिनु नपर्ने
३ साउन (एजेन्सी): आफ्नै श्रीमती भए पनि इच्छाविपरीत सम्भोग गर्न नपाइने कानुन आएसँगै अर्को प्रश्न उठेको थियो, सम्भोग गर्दागर्दै श्रीमतीलाई इच्छा भएन भने के गर्ने ? श्रीमतीको इच्छाविपरीत सम्भोग निरन्तर गर्दा बलात्कार मुद्दामा श्रीमान् जेल जानुपर्छ कि पर्दैन ?
अब यो प्रश्नको सम्बोधन पनि अदालतले दिएको छ । र, यसबाट पक्कै पनि धेरै पुरुष खुसी हुनेछन् । अमेरिकाको एक अदालतले दिएको निर्णयअनुसार, अब महिलाले एकपटक स्वीकृति जनाइसकेपछि त्यसबाट पछि हट्न पाउने छैनन् । सम्भोग गर्दागर्दै इच्छा लागेन भन्दैमा पुरुषमाथि वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा चलाउन नपाउने अदालतको फैसलामा छ ।
‘एकपटक स्वीकृति जनाइसकेपछि महिलाले त्यो स्वीकृति फिर्ता लिन पाउँदैनन्,’ फैसलाका बारेमा एजेन्सीहरुले लेखेका छन्, ‘पुरुषले खुरुखुरु आफ्नो काम पूरा गरे हुन्छ ।’
अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना राज्यको एउटा अदालतले सुरुमा महिलाले सम्भोग गर्दागर्दै आफूलाई पीडा भएमा वा पुरुष हिंस्रक भएमा वा अन्य कारणले सम्भोग गर्ने इच्छा नभएमा स्वीकृति फिर्ता लिन पाउने फैसला गरेको थियो । साथै, महिलाको इच्छाविपरीत सम्भोग जारी राख्ने पुरुषलाई बलात्कार अभियोगमा सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।
त्यस मुद्दाको पुनरावेदनमा सुनुवाई गर्दै राज्यको सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको निर्णय उल्टाएको छ ।
१९ वर्षीया महिला आलिया पाल्मर एउटा पार्टीमा एउटा पुरुषसँग पहिला सम्भोगका निम्ति तयार हुन्छिन् । तर, बीचैमा उनको मनःस्थिति परिवर्तन हुन्छ । आफू त्यतिञ्जेल कुमारी रहेको र कुमारित्व बचाउनुपर्ने धारणा आएको भन्दै उनले बीचैमा नाइँनास्तिर गर्छिन् । तर, पुरुषले उनको इच्छाविपरीत सम्भोग जारी राख्छन् ।
१९ वर्षअघिको त्यो घटनामा पीडित भनिएकी महिला अहिले ३८ वर्ष पुगिसकेकी छन् । र, अन्ततः यस्ता प्रकरणमा पुरुष दोषी नहुने नजिर अदालतले स्थापित गरेको छ ।